पछिल्लो समयका लोकप्रिय युवा स्टार हुन्, अनमोल केसी र प्रदीप खड्का ।
यी दुवै कलाकारको भव्य ‘स्टारडम’ छ । निकै राम्रो ‘फ्यान फ्लोइङ’ छ ।
अर्को संयोग पनि मिल्छ – चलचित्र उद्योगमा यी दुवै कलाकारको आगमन पनि लगभग उस्तै समयमा भएको हो । उनीहरूले चलचित्रमा पाउने भूमिका पनि उस्तै खालको छ ।
‘लभ स्टोरी’ चलचित्रका लागि सबैभन्दा धेरै खोजिने अभिनेताको सूचीमा अनमोल र प्रदीपको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनीहरूका चलचित्र प्रदर्शन हुँदा एकखालको हल्ला हुन्छ । मिडियामा समाचार राम्रै ‘कभरेज’ हुन्छ । चलचित्र हेर्न दर्शकको भीड लाग्छ ।
अर्को संयोग के पनि मिल्छ भने यी दुवै अभिनेतालाई न पाका पुस्ताका दर्शकले चिन्छन्, न बालबालिकाले । उनीहरूलाई चिन्ने र मन पराउने पुस्ता भनेको युवा पुस्ता हो ।
हाल अभिनेता अनमोल केसी ‘ए मेरो हजुर ४’ को छायांकनमा व्यस्त छन्, प्रदीप खड्का चलचित्र ‘प्रेम गीत ३’ को छायांकन सकेर चलचित्र ‘हुतुतु’को प्रि–प्रोडक्सनमा व्यस्त छन् । अनमोल यो चलचित्र सक्नासाथ ‘एन्टी हिरो’मा व्यस्त हुनेछन् । उनको लाइनअपमा अर्को चलचित्र ‘पारस’ पनि छ ।
भुवन केसीका अनुसार अनमोलले ए मेरो हजुर ४ को काम सकेपछि पारस अथवा एन्टी हिरो जुन चलचित्रमा काम गर्न सक्नेछन् । प्रदीप हुतुतु सकेपछि दिनेश राउतको नयाँ चलचित्रमा काम गर्दैछन् ।
न चलचित्रको अभाव, न स्टारडमको खडेरी । लोभलाग्दो स्टारडम र राम्रो फ्यान फलोइङबीच अनमोल र प्रदीपबीच ‘स्टारडम’को ठूलो लडाइँ छ । उनीहरू एकअर्काबीच भेटघाट गर्दैनन् । फोनमा पनि कुराकानी हुँदैन । एकले अर्काको विषयमा बोल्न पनि पैसा लाग्छ कि जस्तो गर्छन् ।
सार्वजनिक समारोहमा समेत उनीहरू एकै समयमा उपस्थित हुँदैनन् । उनीहरू निकट एक निर्देशक भन्छन्, ‘दुवैलाई स्टारडमको घमण्ड छ । सोही कारण चलचित्र उद्योगमा लोकप्रिय अभिनेताको सूचीमा परेको ६–७ वर्षमा समेत उनीहरू सँगै कफी भेटघाट गरेको सुनिएको छैन ।’
निरन्तर भेट हुन्छ : प्रदीप, व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ : अनमोल
अनमोल–प्रदीपबीच स्टारडमको कतिसम्म लडाइँ छ भन्ने कुरा उनीहरू निकटलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर अनमोल र प्रदीपले भने यस कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् । दुवैलाई स्टारडमको निकै घमण्ड छ, जुन कुरा चलचित्र उद्योगका जानेमाने सबैलाई थाहा छ ।
हालै भएको भेटमा प्रदीपले अनमोलसँग निरन्तर गफ हुने गरेको र भेटघाट भइराख्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूहरू छिट्टै कुनै एक चलचित्रमा सँगै काम गर्ने सम्भावना समेत रहेको बताए । प्रदीप भन्छन्, ‘सँगै काम गर्ने गरी एक स्क्रिप्टमा काम भइराखेको छ । दर्शकले चाँडै एक चलचित्रमा हामी २ जनालाई सँगै भेट्नुहुनेछ ।’
अनमोलले भने व्यक्तिगत रूपमा प्रदीपलाई नचिन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘उहाँ राम्रो कलाकार हो । उहाँले काम गरेका चलचित्रहरूलाई फलो गरेको छु । तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई नजिकबाट चिन्दिनँ ।’
प्रदीपले भनेजस्तो छिट्टै एक चलचित्रमा सँगै काम गर्ने विषयबारे अनमोलले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । उनले थपे, ‘भविष्यको कुरा त कसलाई थाहा हुन्छ ? सँगै काम गर्न सकिएला तर अहिले उहाँ र म एउटै चलचित्रमा काम गर्ने कुरा भर्खरै सम्भव होला जस्तो लाग्दैन ।’
प्रदीपभन्दा अनमोल माथि ?
अनमोल र प्रदीपमध्ये कुन अभिनेताका चलचित्र ‘हिट’ छन् ? त्यसका लागि उनीहरूले काम गरेका विगतका चलचित्रको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । प्रदीप खड्का सन्तोष सेनको आसुसेन ब्यानरबाट सधै हिट हुन्छन्, अन्य ब्यानरका चलचित्र उनलाई फापेको देखिन्न । तर अनमोल अभिनित धेरैजसो चलचित्र हिट छन् ।
प्रदीपले काम गरेको पहिलो चलचित्र स्केप दर्शकले नाम समेत सुन्न भ्याएनन् । त्यसपछि काम गरेका २ चलचित्र प्रेम गीत र प्रेम गीत २ निकै हिट भए । ‘प्रेम गीत २’मा राम्रो काम गरेबापत यस चलचित्रका निर्माता सन्तोष सेनले ५२ लाख रुपैयाँको कार गिफ्ट दिए । त्यसपछि उनले लगत्तै सन्तोष सेनको ब्यानरबाट बाहिर गएर रोज, लभ स्टेसन र लिलिबिलीमा काम गरे । तर रोज र लभ स्टेसन नराम्रोसँग पछारिएपछि भने प्रदीप फेरी सन्तोष सेनको क्याम्पमा फर्किएका छन् ।
उनले सन्तोषको क्याम्पबाहिर गएर काम गरेको चलचित्र लिलिबीली हो, जुन ठीकै चल्यो । तर यो चलचित्र चल्दै गर्दा निर्माताद्वय मिलन चाम्स र सुदीप खड्काको अर्का निर्माता गोविन्द शाहबीच आर्थिकको मामिलामा अहिलेसम्म लडाइँ छ । आम्दानी राम्रै गरेपनि गोविन्द शाहीले रकम लुकाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी नै पर्‍यो, प्रहरीले गोविन्दलाई पटक–पटक समात्दै धरौटीमा छाडेको छ । तर हिसाबकिताब अझै मिलेको छैन ।
भन्नेले त के समेत भन्छन् भने प्रदीप खड्काभन्दा हिट आसुसेन फिल्म ब्यानर छ । प्रदीपभन्दा यस चलचित्रका निर्माता सन्तोष सेनको स्टारडम बलियो छ । किनभने यो ब्यानरबाट कलाकार हिट हुन सहज छ । सोही कारण ब्यानरसँग नजिक रहेर काम गर्न नेपालका हरेकजसो कलाकारलाई मन छ । अनमोलले समेत यस ब्यानरबाट छिट्टै एक चलचित्रमा काम गर्दैछन् । जसका लागि अनमोल र सन्तोष सेनको पटक–पटक भेटघाट समेत भएको छ ।
अनमोलले यसअघि काम गरेका चलचित्रको हिसाबकिताब निकाल्ने हो भने उनले काम गरेका ९० प्रतिशत चचित्र सफल छन् । अनमोलको डेब्यु प्रोजेक्ट ‘होस्टेल’ हिट प्रोजेक्ट हो । त्यसपछि उनले जेरी, ड्रिम्स, गाजलु, कृ, क्याप्टेन, ए मेरो हजुर ३ लगायतका चलचित्रमा काम गरे । तर अनमोलको चलचित्र कृ र क्याप्टेन व्यावसायिक रूपमा निर्माण पक्षले सोचेजस्तो भएन । बाँकी उनका अधिकांश चलचित्र सफल भएको मानिन्छ ।
अनमोल र प्रदीपबीच साइलेन्ट फाइट राम्रै देख्न सकिन्छ । उनीहरू कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदाको शैली, पारिश्रमिकको माग र देखावटी मपाइत्व शैलीले पनि उनीहरूबीच भित्रभित्रै लडाइँ छ भन्न सकिन्छ ।
बलिउडमा ‘साइलेन्ट फाइट’ सलमान खान, शाहरूख खान र आमिर खानको वर्षौंसम्म चल्यो । तर उनीहरूबीच भित्रभित्र जतिसुकै ठूलो लडाइँ भए पनि उनीहरूका फ्यानहरू कित्ता–कित्तामा बाँडिए पनि यी सेलिब्रेटीहरू निरन्तर भेटघाट गर्छन् । कफी गफ गर्छन् । एकले अर्काको चलचित्र प्रदर्शनका बेला शुभकामना दिन्छन् । सहयोग गर्छन् ।
तर अनमोल र प्रदीप भने यस्तो मामिलामा जानकार नै छैनन् । सँगै भेटेर चलचित्र उद्योगको विगत वर्तमान र भविष्यबारे कहिल्यै छलफल गरेको सुनिएको छैन ।
तेस्रो स्टार जन्मने मौका
अनमोल र प्रदीपको मपाइत्व व्यवहारले चलचित्र उद्योगमा अन्य केही स्टारलाई रामै्र फाइदा हुन पुगेको छ । उनीहरूको साइलेन्ट फाइटका कारण पल शाह, पुष्प खड्का, आकाश श्रेष्ठ जस्ता केही स्टारका लागि भने फाइदा भएको छ ।
चलचित्र उद्योगका निर्देशक तथा निर्माताले तेस्रो विकल्प खोज्ने क्रममा प्रदीप र अनमोल पाखा लाग्दै अरुले काम पाइरहेका छन् । अन्य कलाकारलाई चम्किने मौका मिलेको छ । विराज भट्ट, निखिल उप्रेती पाखा लागेपछि आर्यन सिग्देल र जीवन लुइटेलको राम्रो पकड देखियो । जीवन अमेरिका पलायन भए, आर्यन अझै चलचित्र उद्योगमै सक्रिय छन् । त्यसपछि भने सौगात मल्ल र दयाहाङ राईको आगमन भयो । त्यसपछि नेपाली चलचित्रमा अनमोल, प्रदीपहरूको उदय भएको हो । तर अनमोल र प्रदीपको मपाइत्वले उनीहरूलाई पाखा लगाएर अर्को स्टारले चलचित्र क्षेत्रमा राज गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
बडीगार्ड राख्ने होडबाजी !
रोचक त के भने अनमोलले बडीगार्ड राख्न थालेपछि प्रदीप पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा बडीगार्डसहित देखिन थाले । यस्ता कुरालाई कतिपयले सामान्य प्रतिस्पर्धा मान्छन् तर चलचित्रको सफलता, कमाइजस्ता कुरामा पनि दुवैबीच निकै प्रतिस्पर्धा रहेको मान्नेहरू चलचित्र उद्योगमा धेरै छन् । पछिल्लो समय हरेकजसो कार्यक्रममा यी दुवै स्टार बडीगार्डका साथमा उपस्थित हुने गरेका छन् । तर बलिउड र हलिउडमा जस्तो फ्यानहरूबाटै आक्रमण हुने स्थिति यहाँ छैन ।
अचम्मको कुरा त के छ भने पत्रकार र चलचित्रकर्मीबीच आयोजना हुने विशेष शोमा समेत उनीहरू बडीगार्डको साथमा उपस्थित हुने गर्छन्, जसलाई धेरैले बेतुकको व्यवहार भन्ने गरेका छन् ।
सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको वास्तविक कारणको खुल...